आनशनबाट उठे लगत्तै सप्तरीका बाढी पिडितको उपचारार्थ खटिएका डा. गोविन्द केसीलाई यस्तो सुरक्षा – Etajakhabar
आनशनबाट उठे लगत्तै सप्तरीका बाढी पिडितको उपचारार्थ खटिएका डा. गोविन्द केसीलाई यस्तो सुरक्षा
काठमाडौं– डा. गोविन्द केसी २३ दिनको अनशनबाट तंग्रिन नपाई बाढी प्रभावितको उपचार गर्न बिहीबार सप्तरी पुगे। सप्तरीको कञ्चनपुर पुग्नासाथ डा केसी बिरामीलाई सहयोग र उपचारमा जुटेका छन्।
मेडिकल माफियाविरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका डा केसीलाई सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने भन्दै सप्तरीमा स्थानीय प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ। डा केसीको सुरक्षार्थ सादा पोशाकमा समेत प्रहरी खटिएका छन्।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार मेडिकल क्षेत्रमा रहेका विकृति विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरिरहेका डा केसीको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सुरक्षा दिइरहेको हो । सप्तरीमा सीमावर्ती क्षेत्रबाट आपराधिक समूहको घुसपैठ हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा बस्दोबस्त मिलाएको छ ।
तस्बिर सौजन्यः भोला पासवान
सप्तरी कञ्चनपुरमा प्रहरी निरीक्षक डिल्लीबहादुर चौहानलाई डाक्टर केसीको सुरक्षाका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको छ। उनी बाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले सादा पोशाकमा प्रहरी खटाएको छ। ‘उहाँले ढुक्कसँग शिबिर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई रातिको समयमा हामीले विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएका छौं,’ सप्तरीका एकजना प्रहरी अधिकारीले भने।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पुष्कर कार्कीले सुरक्षा थ्रेटको सूचना नरहे पनि डा केसीलाई क्षेत्र र जिल्लाको समन्वयनमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको बुधबार बताएका थिए। प्रदेश प्रहरी कार्यालय (पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय) का डिआइजी रमेश भट्टराईले डा. केसीको २४सै घन्टा सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी र जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रसँग छलफल गरी प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए।
सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेश सिंहले डा केसीलाई उच्च तहको सुरक्षा दिन प्रहरीले सोही अनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध जिल्लामा मिलाएको बताए। उनका अनुसार डा केसी सप्तरी रहुन्जेल उनको सुरक्षाका लागि प्रहरी तैनाथ रहनेछन्। यस्तै, प्रहरीले डा केसीको सुरक्षा थ्रेटका विषयमा समेत गोप्य सूचना संकलन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १०, २०७४ समय: ७:२४:०५